Syria: Fanoherana ny Kabarin’ny Filoha Assad · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2011 16:29 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, Ελληνικά, македонски, English
Ity lahatsoratra ity dia fitantarana manokana ataonay momba ny Fihetsiketsehana tao Syria taona 2011.
Tabilao mampiseho ny Filoha Syriana Bashar Al Assad, Jolay 2010. Sarin-i Flickr nampiasain'i sharnik (CC BY-NC 2.0).
Tsy tsara ny nandraisan'ireo mpampiasa Twitter izany. @syrianrebels ni-tweet:
Tian'ny vahoaka ho ravàna ny antenimieram-pirenena
ary Muhammad Basheerao amin'ny Al Jazeera nanampy hoe:
Tian'ny vahoaka ho ravàna ny fihatsarahambelatsihy
Wael Alwani, Syriana mpianatra ao Arabia Saodita dia nilaza hoe:
Indrisy, mahamenatra ahy ireto solombavambahoaka ireto … Syriana aho ary tsy mahasolo tena ahy ireo solombavambahoaka ireo …Solombavambahoaka mpihatsaravelatsihy
Ayman, Syriana mpila ravinahitra, dia nanambara ny fanantenany voalohany momba ny fanovàna nandrasana:
Manantena aho ny fanovàna dia hanomboka amin'ny fandroahana ireo solombavambahoaka manorisory ireo
Sasa(@syrianews), Sirana mpitoraka bilaogy sady mpampiasa twtter dia nanolotra ny sosokeviny ho fanatsarana ny toe-draharaha:
zavatra 4 no tokonyh atao: ajanony ny antsoantso, AJANONY. ajanony ny fiampangana ny al jazeera. ajanony ny fiampangàna ireo vahiny. atombohy ny filazàna zavatra, #basharspeech
Shadi Hamid ni-tweet ampahany fohifohy tamin'ny kabarin'i Assad ho an'ireo izay tsy naheno izany:
Famerenana fohifohy ny kabarin'i Bachar : fanovàna angamba. Teti-dratsin'ny vahiny . Ratsy ny fantsona avy amin'ny zana-bolana#Syria
Fitondrana iray manohitra ny fanovàna, andraikitsika no manapa-kevitra amin'izany, amin'ny Zoma, fa tsy anatin'ny 10 taona araka ny nolazainy! #Syria
Satria nifarana tsy dia nisy filazana fanovana azo tsapani-tanana ny kabary, dia nanomboka naneho ny hatezerany sy ny hadisoam-panantenana ireo mpampiasa Twitter. Syriancitizen nilaza hoe:
Marina ry Bashar tsy tena nihoatra noho izay nandrasana no nataona. Manantena izahay fa hanipy ati-mofo sy fanovàna tsy misy dikany aty aminay ianao, hay ny hany mba nanananao dia kabary tsy misy votoatiny akory!!!
Nizara ny fihetsehampo ankapoben'ireo vahoaka izay nanaraka ny kabary i Dina Jaffary , nilaza izy fa:
mahagaga tokoa, ny kabary iray izay tokony ho lafatra indrindra amin'ireo kabariny tsara indrindra no tena ratsy indrindra …#basharspeech
Ary i Seleucid nanampy hoe:
Syriana aho. Rehareha ho ahy lalandava ny fireneko, raha tsy toy izany kosa ireo mpitondra azy.
Leo i RevolutionistSY, ni-tweet izy hoe:
O Ry zalahy, andeha hihaino an'i Samih Shqeir aho.. O Shame, O Shame, (O Mahamenatra, O Mahamenatra) .. Leo io olona tsy misy ilàna azy io aho .. afaka hifoha ho an'ny tanindrazana ve ianao?
Ny hira mitondra ny lohateny hoe O Shame no tiany lazaina amin'izany, natolotra ho an'ireo martioran'i Daraa. An'i Samih Shqeir ny hira, Syriana mpihira fanta-daza amin'ireo hiram-pitiavan-tanindrazana. Asehon'ity horonantsary ity ny hira ahitàna soratra mandady amin'ny teny anglisy (tsindrio ny CC mba hijerena izany).
21 ora izayAmerika Avaratra